Papa Francis vanoenderera mberi nekushanya kuSouthern Africa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Papa Francis vanoenderera mberi nekushanya kuSouthern Africa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Mozambique Breaking News • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Papa Francis kuMozambique
Nemufaro, mazana ezviuru evaKaturike nevamwe maKristu muMozambique nedzimwe nyika dzakavakidzana muSouth Africa vakagamuchira Papa Francis to Mozambiki kwaakasvika Chitatu, pagumbo rake rekutanga rekushanya Africa.
Papa ava kushanya kuMozambique, Madagascar neMauritius kusvika Chipiri svondo rinouya, apo achapedzisa rwendo urwu muSouthern Africa, iko kushanya kwechina kukondinendi ye Africa kubva paakasarudzwa kutungamira Chechi yeKaturike.
Mishumo yakati Baba Vatsvene vaive vaita minamato kuMozambique nguva pfupi vasati vaenda kuMadagascar, nyika yechitsuwa iri muIndian Ocean mamaira anenge 250 kubva kumahombekombe eAfrica.
Papa anotarisirwa kuenderera mberi nerwendo rwake rwenyika nhatu kuSouthern Africa kugadzirisa hurombo hwakanyanya uye nzira dziri nani idzo nyika dzeAfrica dzinogona kushandisa zviwanikwa zvavo kuunza budiriro kuvanhu vavo.
Vatican yakati rwendo rwepapa muAfrica "Kufambisa kweTariro, Runyararo uye Kuyananisa".
Mazana ezviuru zvevanhu muSouthern Africa vanoteera kushanya kwaPontiff kuMozambique kuburikidza nevekunze uye epasi rese terevhizheni, mapepanhau nezvimwe zvinoburitswa, vamwe vachifamba kubva kune dzimwe nyika dzakavakidzana kuenda kuMisa Tsvene kuMaputo.
MuTanzania, vanhu vazhinji vanosanganisira vechidiki, vakadzi nevarume vakaungana munzvimbo dzakasiyana siyana, kusanganisira dzimba dzekutandarira, kuti vaone kushanya kwaPope kuMozambique zvakare.
Iko kushanya kwechipiri naBaba Vatsvene kuAfrica, Maodzanyemba eSahara mushure mekushanya kwakadai kuKenya, Uganda neCentral African Republic makore angangoita mana apfuura.
Chechi yeKaturike ndiyo inotungamira nzvimbo yekupa dzidzo uye hutano mabasa kune vanhu kubva kuTanzania kuenda kune dzimwe nyika muSouthern Africa.